एसईई पछि किन होटल म्यानेजमेन्ट पढ्ने ? – Sudarshan Khabar
एसईई पछि किन होटल म्यानेजमेन्ट पढ्ने ?
धेरै बिद्यार्थिका अभिभावकलाई एसईई पछि आफ्नो छोराछोरीलाई कुन बिषय पढ्न लगाउने र स्वयम बिद्यार्थि आँफैलाई पनि कुन बिषय छनौट गरेर त्यसमा राम्रो करियर बनाउन सकिन्छ भनेर दुविधा हुने गर्दछन् ।
बिभिन्न बिकल्पहरु जस्तै होटल म्यानेजमेन्ट, साईन्स, कमर्स, आर्टस् आदिहरु मध्यवाट होटल म्यानेजमेन्ट किन बढ्ने भन्ने महत्वपुर्ण कारणहरु यस प्रकार छन् ।
१) रचनात्मक हुन :
होटल उद्योगमा सफल हुनको लागि सधैं रचनात्मक बिचारको आवश्यकता पर्दछ ।
होटलमा आउने प्रत्यक पाउना फरक स्वभावका हुन्छन् भने उनिहरुको आवश्यकता पनि फरक फरक प्रकारका हुने गर्दछन् ।
जसका लागि सधैं तयार अनि रचनात्मक हुन आबश्यक हुन्छ ।
तँपाईको आफ्नो रेष्टुरेन्टको लागि नयाँ–नयाँ परिकारको रिसिपि तयार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बार टेन्डरले आकर्षक गार्निसका साथमा नयाँ–नयाँ कक्टेल, मक्टेल बनाउनु पर्ने हुन्छ ।
आफ्नो गेष्टको बर्थ डे अथवा एनिभर्सरीमा तथा अन्य फरक फरक कार्यक्रमहरुमा नयाँ किसिमको डेकुरेशन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस्तै क्रियाकलापहरुले तँपाईलाई झनै रचनात्मक बनाउनुको साथै होटलको पाउनाहरु खुसि र आनन्दित हुने गर्दछन् जसको कदर होटलले सधैं गर्दछ ।
२) जिम्मेवार बन्नु :
होटल म्यनेजरहरु होटलमा हुने हरेक कामका लागि जिम्मेवार हुनु पर्दछ ।
हस्पिटालिटि क्षेत्र त्यस्ता थोरै उधोग हरु मध्यको एउटा उधोग हो जहाँ तँपाईलाई सुरुवाति दिनहरु देखि नै जिम्मेवारीहरु दिन थालिन्छ ।
जसका कारण सानै उमेरमा काम सिक्दै अनि फड्को मार्दै राम्रो पोष्टमा पुग्न सकिन्छ ।
रिसेप्सनिष्ट देखि म्यानेजर सम्म कमि देखि एक्जुकेटिभ सेफ सम्म सबैका आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी हुन्छन् ।
अनुभव संगै पोष्ट बढ्दै जाँदा जिम्मेवारी पनि बढ्दै जाने हुन्छ ।
स्टाफ नियुक्ति गर्नु, ट्रेनिङ दिनु , बजेट तयार गर्नु, सेल्स टार्गेट सेटिङ गर्नु , पाउना संग सफल अनि राम्रो सम्बन्ध बनाउनु जस्ता कामहरु प्रायः होटल म्यानेजरको जिम्मेवारीमा पर्दछ ।
३) बिभिन्न देशका भाषा र संस्कृति जान्न :
यदि तँपाई १०–५ जागिरमा बिश्वास गर्नुहुन्छ भने सम्भवत होटल म्यानेजमेन्ट बिषय तँपाईको लागि होईन ।
होटल उधोगमा अथाहा सम्भावना हुन्छ । जसलाई आत्मसाथ गर्न तँपाईमा प्रशस्त समय र परिवेश संग घुलमिल हुनसक्ने क्षमता हुनु पर्दछ ।
तँपाई फाईन डाईनिङ्ग रेष्टुरेन्ट देखि ईन्टरनेशनल चेन होटल हरुमा काम गरिरहदा कुनै एउटा बिशेष डिपार्टमेन्ट समालि रहेको अथवा जेनेरल म्यानेजरका रुपमा काम गरिरहँदा तँपाईको होटल संसारका बिभिन्न ठुला सहरमा हुन सक्ने छ ।
जँहा प्रत्यक दिन नयाँ चुनौतिहरुको सामना गर्दै संसार भरिका पाहुनाहरुलाई स्वगत–सत्कार गर्दै सुमधुर सम्बन्ध बनाउने अवसर मिल्छ ।
४) कामबाट सम्मान र खुसि मिल्ने :
एउटा होटल म्यानेजरको मुख्य लक्ष्य भनेको नै आफ्ना पाहुनाहरुको राम्रो रेखदेख र उनिहरुलाई खुसि बनाउनु हुन्छ ।
यसका साथै उच्च स्तरिय सेवा र सुविधा प्रदान गरि उनिहरुको मुहारमा खुसि ल्याउनु हुन्छ ।
हामि नेपालीहरु हाम्रो हस्पिटालिटिको कारण पनि संसारभर प्रसिद्ध छौं । हस्पिटालिटि हाम्रो कल्चरमा छ जसको उपयोग हामिले गर्नुपर्ने हुन्छ ।
जव तँपाई कुनै होटलमा काम गरिरहनु हुँदा तँपाईको सेवा तथा सत्कारले पाहुनाहरु खुसिले भरिपुर्ण, सकरात्मक प्रतिकृया दिन्छन् त्यसले तँपाईलाई उच्च स्तरको काम प्रतिको सन्तुष्टी दिनका साथै अझ राम्रो गर्ने प्रेरणा पनि मिल्दछ ।
(ईज्जतका साथ धन्यवाद दिन्छन्)
५) अन्र्तराष्ट्रिय भ्रमणको मौका मिल्ने :
यस संसार भर अतिनै तिब्र गतिमा बिकाश भईरहेको हस्पिटालिटी र ट्राभल एण्ड टुरीजम क्षेत्रले अत्यन्त धेरै मानिसहरुलाई रोजगारी दिईरहेको छ ।
यदि तँपाई एक ईन्टरनेशनल चेन होटलमा काम गर्नुहुन्छ भने देश भित्र मात्र नभएर संसारका बिभिन्न अति आकर्षक ठाँउहरुमा गएर घुम्न संगसंगै त्यस होटलको चेनमा काम गर्ने अवसर पाउन सक्नुहुनेछ ।
यसका साथै तँपाई काम गर्ने होटल तथा रेष्टुरेन्टमा तँपाईलाई मन पर्ने सेलिब्रेटि, स्पोटर्स म्यान अनि बिभिन्न क्षेत्रका उच्च स्तरिय ओहोदामा रहेका ब्यक्तिहरु संग समेत भेट गर्ने अवसर प्राप्त हुन सक्ने छ ।
६) एक भन्दा धेरै करियर बिकल्प रहने :
तपाईले होटल म्यानेजमेन्ट बिषयमा दक्षता हाँसिल गरेपछि तँपाईसंग धेरै बिकल्पहरु रहन्छन् जस्तै कि तँपाई फुड प्रडक्सन डिपार्टमेन्टको ; बेकरी, प्याष्ट्री, हट किचनका साथै थुप्रै ईन्टरनेशनल क्यूजिनहरु मध्यबाट छान्न सक्नुहुने छ ।
फुड एण्ड वेभरेजमा सर्भर देखि बार टेन्डर, बरिस्ता (कफि मेकर) आदि बाट छान्न सक्नुहुन्छ ।
त्यस्तै गरि फ्रन्ट अफिस र हाउसकिपिङका बिभिन्न सव डिपार्टमेन्टहरु मानव संसाधन बिभाग, सेल्स एण्ड मार्केटिङ जस्ता डिपार्टमेन्टमा करियर बनाउन सक्नु हुनेछ ।
यसका साथसाथै होटल म्यानेजमेन्टको ज्ञान सिप हासिल गरे संगै बिभिन्न होटल म्यानेजमेन्टका कलेज तथा ईन्स्टिच्युटहरुमा प्रशिक्षकको रुपमा समेत करियर बनाउन सकिने छ ।
साथै आफ्नौ लगानिमा होटल तथा रेष्टुरेन्ट ब्यवसाय संचालन गरेर समेत बस्न सकिने छ ।
७) उच्च स्तरको कमाई गर्न सकिने :
होटल उधोग एक हेन्सम (आकर्षक) तलव प्रदान गर्ने उधोगको रुपमा समेत परिचित हुदै आएको छ ।
तँपाई संग काम सम्वन्धी ज्ञान र सिप रहेको खण्डमा होटलले राम्रो पोजिसनमा आकर्षक तलवका साथ प्रस्ताव गर्न सक्छन् ।
होटल उधोगमा राम्रो कामको सँधैं प्रसंसा हुने हुँदा टिप, सर्भिस चार्जका साथै अन्न बिबिध आकर्षक सेवा तथा सुविधाहरु समेत उपलब्ध हुने गर्दछ ।